Tetiandro manara-bolana sy masoandro - Wikipedia
Ny tetiandro manara-bolana sy masoandro dia tetiandro anitana volana mitovy faharetana (isan'ny andro) amin'ny tsingerim-pihodinan'ny Volana amin'ny tany (29 na 30 andro) araka ny hitan'ny maso, sady ahitana volana miisa roa ambin'ny folo, nefa misy fampifanandrifiana ny tsingerin-taona amin'ny tsingerim-pihodinan'ny Tany amin'ny Masoandro na amin'ny tsingerin'ny fizaran-taona.
Ireto avy ireo tetiandro manara-bolana sy masoandro fantatra indrindra: ny tetiandro hebreo, ny tetiandro samaritana, ny tetiandro sinoa, ny tetiandro tibetàna ary ny tetiandro hindoa. Ny tetiandro manara-bolana sy masoandro ny an'ny Hebreo sy ny Sinoa dia ampiasaina hamaritana ny andro hanaovana firavoravoam-pivavahana na ara-pomban-drazana.
Misy 12 volana ny iray taona nefa indraindray dia mitombo 13. Mba hanakekezana kokoa ny tsingerim-pihodinan'ny Tany amin'ny Masoandro, izay tsapa amin'ny alalan'ny tsingerin'ny fizaran-taona sy ny toeran'ny antokon-kintana eny amin'ny lanitra, dia anatsofohxana iray volana fanampiny (volana faha-13) isaky ny telo taona eo ny tetiandro manara-bolana sy masoandro. Noho izany misy ireo tetiandro ampiasana ny fifandraisan'ny telo taona amin'ny 37 volana na ny 19 taona amin'ny 235 volana (ity no atao hoe "Tsingerin'i Metona").
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetiandro_manara-bolana_sy_masoandro&oldid=975091"
Dernière modification le 30 Septambra 2019, à 11:09
Voaova farany tamin'ny 30 Septambra 2019 amin'ny 11:09 ity pejy ity.